राप्रपा नेताको गीता छोएर खाएको कसम झापाली जँड्याहाको जस्तो नहोस् Canada Nepal
Sep 25 2020 | २०७७, आश्विन ९गते
२०७७, आश्विन ९गते
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल
हेर्नुहोस् यस्तो छ शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आठ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
बेलायतमा खोप परीक्षणका लागि 'स्वयंसेवकहरूलाई भाइरस दिइन सक्ने'
भियतनाम प्रहरीद्वारा प्रयोग भइसकेका तीन लाख बढी कन्डम बरामद
डा.रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, कुलमान घिसिङ राजनीतिदेखि धेरै माथि छन्, सरकारले पुनः नियुक्ति गरोस्
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ८७ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वामदेवलाई सांसद मनोनीत गर्ने विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ?
राप्रपा नेताको गीता छोएर खाएको कसम झापाली जँड्याहाको जस्तो नहोस्
क्यानाडानेपाल भाद्र २३ २०७७
गाेपाल पाैड्याल । गत निर्वाचनमा नमिठो पराजय बेहोरेपछी अन्ततः दुई पार्टी राप्रपा र राप्रपा(संयुक्त) २०७६ फाल्गुन २४ गते पार्टी एक हुने आधारपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन पार्टी अध्यक्ष रहनेगरि आधार पत्र तयार गरि झण्डै आधा रातमा हस्ताक्षर हुँदा कार्यकर्तामा धेरै ठुलो उत्साहको संचार भएको थियो। भव्य रुपमा एक समारोह बीच तीनै अध्यक्षहरुले हिन्दुहरुको धर्म ग्रन्थ गीता हातमा लिएर कसम खादैँ अब उप्रान्त पार्टी फुटाउने छैनौँ र फुटाउन दिने पनि छैनौँ भन्दा कार्यक्रममा उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरुले गड्गडाहट ताली पाएका थिए ।
तालीकोसाथमा साइँसाइँ र सुईंसुईंको ठूलो समर्थनसमेत प्राप्त गरेका थिए। पछिल्लो समय नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमा आएको त्यो जोश जाँगर र उत्साह धेरै लामोसम्म टिक्न सकिरहेको छैन। नेताहरु एकआपसमा मिल्न सकिरहेका छैनन् । त्यो एकतालाई भावनात्मक एकताको रुपमा अगाडि लैजानको निमित्त के कुराले बाधा अड्चन परेको छ, त्यो बुझिनसक्नुको पहेली बनिरहेको छ। एकीकरणलाई निश्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपको अनन्त श्रृंखला स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । गीता छोएर कसम मात्र नखाएको भए अस्ति नै आ–आफ्नो बाटो लागि सक्ने थिए भन्दा अतिशयोक्ती नहुने परिस्थिति घाम जत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ।
१२÷१५ वर्ष संघर्ष गरेर सबैले छोडेको र फालेको संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दु राष्ट्रलाई एजेन्डाको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएको र हामीले यो एजेन्डा बोक्दा कहिले मारिने हो र कहाँ लखेटिने हो भन्ने अवस्थामा ज्यानको प्रवाह नगरी ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित गरिएको मूल मर्मलाई छोडेर अगाडि बढ्नु भनेको आम कार्यकर्ता र नेपाली जनतालाई धोका दिनु हो भन्नुहुन्छ, कमल थापा । उहाँको भनाई छ, बरु चुनाव चिन्हमा साथीभाइहरुसँग सल्लाह गरेर लचकता अपनाउन सकिएला, तर पार्टीको मूल नीति सिद्धान्तै छोडेर अगाडि जानु भनेको सरासर धोका हो र यसरी अगाडि बढ्नु गलत हुन्छ।
कमल थापा निकट एक नेता भन्छन, हिजो पटक पटक सत्तामा गयो, धर्म बेच्यो भनेर आरोप लगाउनेहरु अहिले पनि जीवितै छन् र कमल थापाले कहाँ गल्ती गर्छ र फेरि सत्तोसराप गरौँ भनेर बसेका छन् र फेरि नीति सिद्धान्त र चुनाव चिन्हमा सम्झौता गर्यो भने तिनैले भन्नेछन, कमल थापाले गाई बेच्यो, नीति सिद्धान्त बेच्यो भनेर । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘अहिले धर्म सड्ढटको अबस्था छ, जे गर्दा पनि आगामि यात्रा कठिन हुनेछ ।’
हामी नीति सिद्धान्तमा अडिग छौँ। संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दु राष्ट्रमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन । सिद्धान्तप्रति हाम्रो अविचलित प्रतिबद्धता रहनेछ, बरु हामी समाप्त हुन तयार छौ, सिद्धान्त र विचारलाई परित्याग गर्न नसक्ने दृढता थापाको छ । एकीकरणको विधि र प्रकृया मिलाएर अगाडि बढौँ, हामी राप्रपा प्रवेश गर्ने होइन दुई पार्टी एकीकरण हो, सम्मानजनक एकीकरणको प्रकृयाबाट कसैको मान प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमा ठेस नपुग्ने गरी एकिकरणको प्रकृयामा जाउ भन्नुहुन्छ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । एकता नै बल हो एकताको विकल्प छैन । विधि सम्मत एकता गरौँ । डा. लोहनीको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विधिसम्मत रुपा निर्वाचन आयोग जाऔँ ।’
पशुपति शमशेर राणा पनि जसरी पनि एकता प्रकृया टुङ्गोमा पु¥याउँ भन्नुहुन्छ । जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा मेरा धेरै ठुलो इच्छा आकांक्षा छैनन् । यो पार्टीलाई एक गराएर सम्पूर्ण कार्यकर्ताको राजनैतिक भविष्य सूनिश्चित गराउने र वेथेतिमा चलेको देशलाई थितिमा ल्याउने हो भन्नुहुन्छ राणा ।
एकथरी झिनो रुपमा भने पनि नेता कार्यकर्ताहरु कुनै हालतमा पार्टी मिल्नुहुन्न भनेर पनि हिँडिरहेको अवस्था छ । पार्टी नमिलाउन दबाब दिइरहनु भएको छ । हिजो तीन वटा पार्टी मिल्दा ठूल्ठूला पदहरुमा बसेकाहरु अब पार्टी एक भएपछि हिजोको हैसियत होला कि नहोला भनेर चिन्तित् रहेका छन् । जिन्दगीमा कुनै तहको निर्वाचनमा भाग नलिनेहरु चुनाव चिन्हमा बढी बहस गरिरहेका छन् । चुनाब लड्न नपर्ने, पार्टी संगठन र निर्माणमा कुनै भूमिका खेल्नुनपर्ने, तर चुनाव चिन्हको विषयलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोज्ने तुकविहिन तर्क पनि यदाकदा उठिरहेका छन् ।कोही ठूला नेताले कहाँ गल्ती गर्छन् र च्याप्प घाँटीमा समाउँला भनेर ढुकेर बसेको पाइन्छ ।
केही व्यक्ति कुन्ठा र पूर्वाग्रहको फोहोरी आहालमा चुर्लुम्म डुब्न घिनाउँदैनन् । एकोहोरो व्यक्तिको निन्दामा रमाइरहेको पाइन्छ, जसले कुनै अर्थ राख्दैन । अहिलेको वास्तविक आवस्यकता के हो ? मुलुकले, कार्यकर्ताले, शुभचिन्तकले के अपेक्षा गरेका छन्, त्यसको कुनै समीक्षा र विश्लेषण नगरी एकोहोरो डम्फु बजाइले यो कहिँ नपुग्ने यात्रा बन्न जानेछ । गन्तव्य बिनाको यात्रा टुंगोमा पुग्दैन।
एकता नै बल हो । अब पनि एकता भएन भने नेता कार्यकर्ता मात्रै हैन यो धार नै समाप्त हुन्छ भनी चिन्ता गर्छन्, नेता बुद्धिमान तामाङ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी एजेन्डामा स्थापित हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेता तामाङ । पार्टी जसरी पनि मिल्छ, हामी मिलाउँछौ, कोही नेता कार्यकर्ता र विचलित नहुन आह्वान गर्छन्, अर्का नेता दिपक बोहरा । तर गाँठो कहाँ बाँधिएको छ, थाहा छैन ।
गीता समाएर कसम खाएको सन्दर्भ एउटा रमाइलो प्रसंग उल्लेख गर्दछु । झापामा एकजना सामाजिक व्यक्तित्वले अत्याधिक मादकपदार्थ सेवन गर्न थालेछन्, त्यसपछि नजिकको साथीभाइले इलाममा रहेको सानो पाथिभरा मन्दिरमा लिएर गएछन् । मन्दिरमा छुवाएर कसम खान लाएछन । र ती व्यक्तिले पनि अबदेखि जाँड रक्सी खान्न हे पाथिभरा देवी भनेर कसम खाएर फर्किएछन् । दिन बित्दै गयो, हप्ता महिना हुँदै छ महिना बितेछ । त्यस बिचमा ती व्यक्तिलाई मादक पदार्थ खान अधिक इच्छा भएछ ।
बेकारमा मन्दिरमा गएर कसम खाइएछ भनेर ठूलो पछुतो भएछ । त्यसपछि आफ्ना निकटकाहरुसँग सल्लाह गरेछन् र फेरि सोही सानो पाथिभरा मन्दिरमा गएछन् र मैले नखाइ सकिन माफी गर्देऊ माता भनेर फेरि रक्सी खान थालेछन् । त्यस्तै हाम्रा नेताहरुले पनि त्यसै गरी राष्ट्रिय सभागृहमा गएर मान्छे बोलाएर गीता समाएर गल्ती भएछ भन्दै आआफ्नो बाटो लाग्नुपर्यो या आआफ्नो हठ छोडेर त्यागको राजनीति सुरु गर्नुपर्यो । यसैमा सबैको भलो छ । इतिहासले कहिल्यै क्षमा नगर्ने बाटो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
भाद्र २३, २०७७ मंगलवार ११:२८:४५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी गराएका छन् । विभागीय मन्त्रीकै यो भनाइले ढिलोचाँडो प्राधिकरणमा घिसिङकै नियुक्ति हुने विश्वास आमजनताले गरेका छन् ।
यसैबीच, जनस्वास्थ्यविद डा.रवीन्द्र पाण्डे पनि कुलमानको पक्षमा देखिएका छन् । कुलमान राजनीतिभन्दा धेरै माथि भएको भन्दै उनले सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘उज्यालो युगका पर्याय कुलमान घिसिंग नेपाल आमाका सपुत हुन् । दशकौं अँध्यारो बेचेकाहरू अहिले सलबलाएका छन् ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिंगलाई नै नियुक्ति गर्नु उज्यालो युगको लागि अत्यावश्यक छ । कुलमान घिसिंग राजनीतिदेखि धेरै माथि छन् । सरकारले अबिलम्ब कुलमान घिसिंगलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरोस् । सोलार तथा इन्भर्टर व्यापारीको प्रभाव र दवावमा कोहि नपरोस् ।
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १०:०९:५० बजे : प्रकाशित
# डा.रवीन्द्र पाण्डे
लोडसेडिङ, कुलमान र भ्रम
काठमाडौ । २०७३ भदौ ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएर कुलमान घिसिङ आउँदै गर्दा दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म देशमा लोडसेडिङ थियो । उनी नियुक्त भएको दुई महिनामै काठमाडौंमा लोडसेडिङको तालिका परिमार्जन हँुदै ७ घण्टाबाट अन्त्यसम्म भयो । लोडसेडिङ हट्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर कसरी हट्यो भन्ने स्पष्ट नीति सबैलाई थाहा छैन र थाहा पाउने चासो पनि सायद गरेनन् । के दुई महिनामै कुलमानकै कारण मात्र संभव थियो लोडसेडिङको अन्त्य ?
कुलमान विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आउनु झण्डै २ बर्षदेखि सरकारमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगातार लोडसेडिङ अन्त्यको लागि देखिएका समस्या समाधान र आवश्यक रणनीतिको तयारी थालेका थिए । त्यसबेला देखिनै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले १÷२ बर्ष भित्र नै लोडसेडिङको अन्त्य हुने बताउँदै आएका थिए ।
बजारमा विद्युत खपतको मागभन्दा झण्डै ६० प्रतिशत कम मात्रै विद्युत वितरण गरिरहेको प्राधिकरणले १÷२ बर्षमै लोडसेडिङको अन्त्य गर्छुभन्दा हाँसोमजाक शुरु भएको थियो । सार्वजनिक रुपमै सरकारमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले २०७२ सालदेखि लोडसेडिङको अन्त्य निकट भविष्यमै हुने बताउँदै आएका थिए ।
२०७२ कार्तिक ४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर त्यसबेला आमनागरिकले सो विषयलाई हाँसोमजाक मात्र बनाइएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीतिसहित सरकार लागेको र प्राधिकरणले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरेको भन्दै पटक पटक बोलिरहे । झापामा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
त्यस लगतै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि नयाँ रणनीतिसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सरकार अग्रसर हुँदै आएको थियो । केपी ओलीको सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणासहित ठूलो जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अघि सारे । त्यसपछि २०७२ माघ १ गते पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा सम्बोधन गर्दै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने ठोकुवा नै गरेका थिए । सरकारले त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेकोले एक बर्षमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने उनले दावी गरेका थिए । त्यतिबेलाको तत्कालीन सरकारले एक बर्षमै २५० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु सकाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको र १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाटका राष्ट्रिय योजनाहरु पनि सरकारले अघि सारेको बताएका थिए ।
२०७३ जेष्ठ २१ गते संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एक बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए जिम्मा कसले लिन्छ ? भनी प्रश्न गर्दा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहारतिर हेरेर उत्तर दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराएर टाउको हल्लाएपछि विष्णु पौडेलले सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेका थिए । सहभागी सांसदहरु गलल्ल हाँसे । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि नयाँ कार्यविधिसहितको रणनीति निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । लगतै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधनमन्त्री बने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले २०७३ भदौं ३१ मा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा तयार पारेको रणनीतिअनुसार कार्यसम्पादन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराइयो । कार्यसम्पदान अनुसार घिसिङले विद्युत चुहावटमा कडाई, व्यवस्थापनमा सुधार र मागअनुसार विद्युत खपतलाई सेडुअल मिलाए लगतै कार्तिक(लक्ष्मीपूजाको दिन)देखि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो । २०७३ पौष ८ गते गोरखाको दरौदी ‘ए’ ६ मेगावाटको साना आयोजना उद्घाटन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि केही विद्युत भारतबाट आयात गरेर भएपनि लोडसेडिङ निकट भविष्यमै अन्त्य गरिने बताएका थिए । केपी सरकारले शुरु गरेको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा औपचारिक रुपमा अघि सारिए ।
यहि बीचमा कुलमानले आफ्नो कौशलतालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरे । सरकारसँग गरेको कार्यसम्पदानअनुसार उनले काम गर्दै अघि बढे । प्राधिकरणको अनुरोधलाई मानेर उपभोक्ताहरुले पिकआवर भनिने बेलुकीमा विद्युत खपत कम गरिदिए । प्राधिकरण आफैंले धेरै वाट खपत गर्ने उद्योगलाई बेलुकीमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदियो । यसले गर्दा बेलुकीको माग नै घट्न पुग्यो र पुरानै विद्युत आपूर्तिबाट पनि लोडसेडिङ कम हुन संभव भयो ।
भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको परिमाणलाई वृद्धि गरियो । जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुमा मर्मतसम्भार गरी केही उत्पादन बढाइयो । यी दुई कारणले विद्युतको आपूर्ति नै बढ्न गयो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन, बिजुली खेर नफाल्ने, चुहावट रोक्ने लगायतका व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइयो । नयाँ जलविद्युत केन्द्रबाट बिजुली पनि थपिँदै गयो । यसैकारण २०७५ सम्म देशैभर लोडसेडिङको अन्त्य भयो । हो, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङको मात्र अन्त्य भएन, उनको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु.१ अर्ब ४७ करोड, दोश्रो वर्ष रु.२ अर्ब ८५ करोड, तेश्रो वर्ष रु.९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख खुद नाफा प्राधिकरणले कमायो । चौथो वर्षमा यो नाफा बढेर रु.११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यसका लागि भने कुलमान धन्यवादका पात्र हुन् । उनको कार्यशैली क्षमता र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीमा हुनुपर्नेमा अब्बल ठहरियो । तर कुलमानकै कारण मात्र यी संभव भन्नु एक भ्रम मात्र हो ।
चार वर्षअगाडि कुल विद्युत् खपतको करीब ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात थियो । तर, विद्युत् खपत ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामासमेत आव २०७६÷७७ मा कुल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ । आयातको पनि ६ प्रतिशत निर्यात गरिएको छ । सरकारले अर्को आवबाट नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा अब लोडसेडिङको समस्या छैन । अबको समस्या भनेको विद्युत बढी खपत कसरी गराउने भन्ने हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जो आए पनि अब लोडसेडिङ संभव छैन । किनभने यस बीचमा धेरै नयाँ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । विद्युतको पहँुचमा वृद्धि भएको छ । यस हिसाबले सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कुलमानले जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए । उनी आफ्नो कार्यकालमा सफल मानिएका छन् । तथापि उनकै कार्यकालमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने दर्जनौँ कार्यहरु रोकिएका पनि छन् ।
ग्यास र पेट्रोलियम विस्थापनको मूर्त योजना र खाका तयार पार्न नसक्नु, विद्युत् खपतमा वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन आधार तयार गर्न नसक्नु, पेट्रोल डिजेलको प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सामाग्री प्रयोगको दीर्घकालीन आधार तय गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, रुग्ण बनेका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार गर्न नसक्नु, विद्युत खपतको दर बढाउन प्रभावकारी योजना ल्याउन नसक्नु, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन नसक्नु, ग्रामीण तथा कतिपय शहरीक्षेत्रमा समेत लो भोल्टेजको समस्या समाधान हुन नसक्नु, सोलु करिडोर, काली गण्डकी कोरिडोर, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा लगायतका आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू आफ्नो कार्यकालमा बनाउन नसक्नु र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जस्ता ठुला विद्युत् आयोजनाहरू सफल पार्न नसक्नु कुलमानका कमजोरीहरु हुन् ।
यहि बीचमा पनि उनको कामको प्रशंसा उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने देशमा लोडसेडिङ अन्त्य पहिलो प्रथामिकतामा परे । सामाजिक सञ्जालले गहिराइमा नगई सतही लहलहैमा कुलमानको पर्यावाची नाम उज्यालो राखिदिए । जसका कारण अबका दिनमा उनले गरेका गल्ति र गर्न नसकेका कामहरुका कारण राज्यलाई हुने हानि नोक्सानीमा कुनै लेखाजोखा आमनागरिकले गर्न सकेनन् । सामाजिक सञ्जालकै भरमा एउटा खेती कुलमान र लोडसेडिङको नाममा शुरु गरिएको छ । तर, त्यो पूर्ण रुपमा एउटा भ्रम मात्र हो । यथार्थमा सरकारले चाल्दै आएको कदम र रणनीतिअनुसार मात्र कुलमानको कार्यसम्पादनमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो ।
देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने, ऊर्जामा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, हाई भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने, स्मार्ट ग्रिड तथा स्मार्ट मिटर सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने, भूमिगत तार बिछ्याउने कार्यलाई पूर्णता दिने र विद्युत् व्यापारको दायरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनेलगायतका चुनौतीहरु अझै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामु बाँकी नै छ । के कुलमान नभए यी कामहरु जस्ताको तस्तै हुन्छन् त ?
पक्कै पनि सरकारको आगामी ५ बर्षको लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो रणनीतिमा यी कामहरु विस्तारै सुचारु गर्नुपर्नेछ । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युतलाई शून्य अवस्थामा जारी निर्यात बढाउनु पर्नेछ । अबको ५ बर्षमा नेपालमै हालको भन्दा ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत खपत उत्पादनको सन्तुलनमा माग बढ्ने आँकलन छ । त्यसको परिपूर्ति गर्दै निर्यात बढाउन सके कुलमानको चार बर्षको कार्यकालभन्दा ३ गुणाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रगति विवरण पेश हुने अनुमान छ । त्यसैले नेपालमा अब लोडसेडिङ संभव छैन । तर, सरकारसँगको कार्यसम्पदान अनुसार आफ्नो क्षमतालाई अब्बल रुपमा प्रस्तुत गरेका कुलमान घिसिङ धन्यवादका पात्र भने पक्कै हुन् ।
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १८:५६:२५ बजे : प्रकाशित
डब्लुएचओको षड्यन्त्रमा किन नेपाल फसेको, लकडाउन हाउगुजी देखाउन पाइन्छ ?
विनोद त्रिपाठी । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार संक्रमित संख्या नाघेपछि फेरि लकडाउन लगाउने भनेर जनतालाई मनोवैज्ञानिक त्रसित बनाएछ । सरकार किन जनतालाई तर्साउंछ ? यस्तो वाइहात निर्णय गर्यो भने सरकार यो सबैभन्दा ठुलो आत्मघाती कदम हुनेछ । ६ महिनादेखि थला परेको जनजीवन , व्यापार व्यवसाय बल्ल उठ्न थाल्छ्की जस्तो भएको छ । त्यस्तो दुस्साहस गर्नु पहिले हामी सरकारसँग यी प्रश्न गर्न चाहन्छौं ।
१, के लकडाउन लगाउँदा तपाईंहरुले दिने नक्कली संक्रमित संख्यामा कमि थियो ?
२, यदि लकडाउन खुलेरै कोरोना भाइरस पुरै फैलन्थ्यो भने अहिले सबै मानिसहरु कुनै न कुनै रुपमा छोइएका (physical touching) छन् । यदि तपाइँहरुले भने झैं मानिस मानिस बिच छुने बित्तिकै संक्रमण फैलन्थ्यो भने अहिले दैनिक लाखौं कोरोनाका बिरामी भइसक्थे । यस्तो कुतर्क गरेर जनतालाई बन्धक बनाउन पाइन्छ ?
३, यो सामान्य भाइरस हो । महामारी होइन । केवल आफैं सतर्क बनौं तर आफ्नो रोजीरोटीका कामहरु गर्नुहोला भनेर हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै कोरोनाको नाममा तर्साएर किन जनता मार्न खोजेको ?
४, अब विश्वले यो सिद्ध गरिसक्यो कि कोरोना भाइरस सँगसँगै बाँच्न सिक्नुको विकल्प छैन भनिरहँदा डब्लुएचओको षड्यन्त्रमा किन नेपाल फसेको ?
५, चाडपर्व शुरु भैसकेको छ । साना व्यवसायीहरु, कामदारहरु ६ महिने लकडाउन पीडा भुलेर आफ्नो काममा फर्कन थालेका छन । के अझै कोरोनाको हाउगुजी देखाएर जनतालाई मर्न बाध्य बनाउन पाइन्छ ?
७, पिसिआर रिपोर्टको कुनै विश्वास छैन । एउटै व्यक्तिको फरक फरक ल्याबमा फरक फरक रिपोर्टले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । अनि यस्तो अफवाहका आधारमा जनतालाई बेवकुफ किन बनाएको ?
८, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक यति संक्रमित भन्दै सूचना दिन्छ । ती कहाँका बिरामी हुन, कुन अस्पतालमा भर्ना भए, आइसोलेसनमा को को बसेका छन् भन्ने कुरा किन स्पष्ट भन्दैन ? किनकि यदि मन्त्रालयले भनेका दैनिक हजार भन्दा कोरोनाका बिरामी भएको भए हाम्रा अस्पतालले कसरी धान्न सक्छ ? यो सिट वा अन्य वार्ड क्षमता सबै अस्पतालको जोड्दा पनि छैन । अनि जनतालाई तर्साउन अनावश्यक बढी संक्रमित किन देखाएको ? मन्त्रालयले पत्रकार भेला मार्फत दिने यस्ता सूचना कहिले बन्द गर्ने ?
९, अहिलेसम्म ठ्याकै कोरोना लागेर कसैको मृत्यु भएको छैन । तर, किन जनतालाई झुक्याएको ? यदि सरकारले भने झैं कोरोनाले मृत्यु भएको हो भने जनताले भनेको अस्पताल र चिकित्सकबाट मृतकको पोष्टमार्टम गर्न पाउनुपर्छ । नत्र झुठ विवरण दिएर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा मार्न पाइँदैन । यो ठूलो अपराध हो ।
१०, यो कोविड–१९ को सूचना सबैतिर बन्द गरौं । मोबाइलका रिङ्ग टोनदेखि रेडियोका सूचनासम्मले सबैलाई दिक्क बनाएको छ । अब सबैले यो भाइरस के हो कसरी सतर्कता अपनाउने बुझिसकेका छन । त्यसैले सबै प्रकारका कोरोना हाउगुजी बन्द गरेर रमाइलो सामाजिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । किनकि रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि भनेको नै हौसला हो । उमंग हो । फेरि स्मरणहोस, कोरोना महामारी होइन । सामान्य हो । त्यसैले सरकारले भनोस् , महामारी प्रमाणित नभएको यो भाइरसलाई लिएर किन गलत सूचना जारी गरेको ? जनतालाई विदेशी मेडिकल माफियाको लहलहैमा लागेर, डब्लुएचओको अनुदान आउने नाममा किन सताएको ?
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १२:०५:३८ बजे : प्रकाशित
मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने– परिक्षीत नरसिंह राणापछि कुलमान घिसिङले मेरो मन जिते
मदनकृष्ण श्रेष्ठ । अहिले सम्झिँदा साँच्चिकै एका देशको कथा झैं लाग्छ मैले कर्मचारी संचय कोषमा जागिर खाइरहंदाका ती दिनहरु .‍‍....
एउटा कार्यालयको प्रमुख व्यक्तिले आफुलाई दिइएको जिम्मालाई ईमान्दारिका साथ निभाई दिएमा आफ्नो क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको स्टन्टबाट मुक्त गरेर जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने एउटा वास्तबिक उदाहरणको कथा थियो त्यो ...
मैले २०२३ सालदेखि करिब १२ वर्ष जागीर खाएको कार्यालय कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक श्री परिक्षीत नरसिंह राणाले शत प्रतिशत आफु ईमान्दार भएर नेतृत्व दिएका कारण त्यसताकाका सबै कर्मचारिहरुलाई आफ्ना सेवाग्राहीहरुबाट घुसको त कल्पनै नगरौं एक कप चिया, एक खिल्ली चुरोट खान त के छुनसम्म पनि हिम्मत गर्न नसक्ने बनाई दिएका थिए ।
सेवाग्राहीको तर्फबाट एक खिल्ली चुरोट लिईहालेमा कुरा तुरुन्त माथि पुगि सक्थ्यो र त्यस ब्यक्तिलाई अपराधी मानेर उत्तिनैखेरै उस्लाई जागिरबाट सदाका लागि घोक्रेठ्याक लाईन्थ्यो। हायर एण्ड फायरको एउटा कडा उदाहरण थियो ।
यो कुरा मैले मेरो आत्मकथा “महको म“ मा समेत लेखेकोछु । उहाँको नेतृत्वमा काम गरेका कर्मचारीहरु आजसम्म पनि प्रशासकज्यूप्रति गर्व गर्दछन।
कुरा अझै अलि बाँकी छ । पछि उहाँको कार्यकाल सकपछि त्यत्रो ठूलो बित्तिय संस्था हाँकिरहेका व्यक्तिलाई अपमान गरे सरह एउटा सानु ईन्धन संस्थनमा सरुवा गरियो।
त्यहा पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने कार्यमा लाग्नु भो पछि भ्रष्टाचारिहरु सबै मिलेर उहाँलाई नै त्यहाँबाट हटाई दिए । परिक्षीत नर्सिंह जस्ता ईमान्दार र नैतिकवान कर्मचारीहरु अरु पनि प्रशस्त छन हाम्रो देशमा तर उहाँहरु को को हुन म चिन्दिन ।
सबैको भनौं या मेरो मन जितेको व्यक्तिहरुमा उनै परिक्षीत नरसिंह राणापछि उत्तिकै मन जितेका व्यक्ति हुन कुलमान घिसिङ ।
उहाँहरु दुबै मेरा न साथीभाइ हुन न कुनै नातेदार नै । तर दुबैप्रति मेरो आत्मसम्मान छ। उहाँ जस्ता ब्यक्तीलाई सरकारले सदुपयोग गरेर इमान्दारीको पनि अनुकरण हुंदै जावस भन्ने मेरो मनको तमन्ना मात्र हो।
आश्विन १, २०७७ बिहिवार १२:१६:५७ बजे : प्रकाशित
# मदनकृष्ण श्रेष्ठ
काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो, डा. पाण्डे भन्छन् - निषेधाज्ञा खुलेपछि सबैले निम्न कार्यहरु अबलम्बन गरौँ
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा भोलिदेखि लागु हुने गरि केही खुकुलो पारेको छ ।
यसैबीच कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा जानकारी दिदै आइरहेका डा. रवीन्द्र पाण्डेले केही सुझावहरु दिएका छन् । उनले निषेधाज्ञा खुलेपछि सुरक्षित भएर काम गर्न सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् - सरकारले काठमाडौं उपत्याकामा भोलिदेखि लागु हुने गरि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । यो निर्णय आम जनताको पक्षमा छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको कोरोना संक्रमण घटेर होइन । आम जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक भार परेको कारण निषेधाज्ञा खुकुलो भएको हो । सरकारले बल हाम्रो हातमा दिएको छ।
अब हामी सबैले निम्न कार्यहरु अबलम्बन गरौँ :
- बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरु घरभित्र बस्ने । सकभर घरभित्र पनि छुट्टै कोठामा बस्ने । काम गर्न बाहिर जाने व्यक्तिसंग दुरी कायम गर्ने । कुरा गर्दा मास्क लगाउने ।
- मर्निंग वाक वा इभिनिंग वाक घरमै गर्ने ।
- खुल्यो भनेर बिनाकाम घरबाहिर नजाने । घरबाहिर जति छोंटो समय बितायो त्यति धेरै सुरक्षित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
- घरबाहिर निस्कँदा अनिबार्य रुपमा सहि तरिकाले मास्क लगाउने । सम्भव भएसम्म २ मिटरको दुरी कायम गर्ने। भीडभाडमा नजाने, भीडभाड नगर्ने।
- सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा मास्क तथा पंजा लगाउने । स्यानिटाइजरले हात सफा गरिरहने । बिशेष सतर्क हुने ।
- हरेक पसलले व्यक्तिगत दुरी कायम हुनेगरि काउन्टरको ब्यबस्थापन गर्ने । मास्क नलगाएका ग्राहकलाई मास्क दिने । सबैको लागि ठूलो स्यानिटाइजर राख्ने । झ्यालढोका खोलेर भेन्टिलेसनको प्रत्याभूति गर्ने ।
- सकभर हरेक पसलमा परल मुल्यमा सस्तो मास्क तथा स्यानिटाइजर बिक्रीवितरण गर्न राख्ने ।
- ग्राहक ब्यबस्थापन कुशल ढंगले गर्ने । भीडभाड नगराउने ।
- पसल र हरेक सामान संक्रमणरहित बनाउने ।
- चियापसल, कफीसप तथा पसलमा साथीहरु संगै बस्ने, गफ गर्ने, चुरोट खाने, सुर्ती मोलेर बाँड्ने, थुक्ने जस्ता काम नगर्ने ।
- कुन व्यक्ति संक्रमित छ, कुन व्यक्ति छैन भन्ने अनुहार, सम्बन्ध, शिक्षा, पद आदि हेरेर थाहा हुँदैन । हरेक व्यक्तिसंग सुरक्षित ब्यबहार गर्ने ।
- सामान किन्दा धेरै छान्ने काम नगर्ने । किनमेलको लिस्ट घरमै बनाएर जाने । पसलहरुमा एकदम छोंटो समय बिताउने । जति लामो समय पसलभित्र वा बसभित्र बस्यौं, त्यति नै जोखिम हुन्छ।
- सकभर तरकारी बजारबाट तरकारी नकिन्ने । घर नजिकको पसलबाट किन्ने । बसेर छान्ने, छाम्ने काम नगर्ने ।
- डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा सपिंग मलमा पर्याप्त भेन्टिलेसन हुँदैन | तसर्थ आफुले बनाएको लिस्ट अनुसार फटाफट किनेर बाहिरिने । लामो समय नबिताउने ।
- भोको, मास्क किन्न नसकेको तथा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सक्दो सहयोग गरेर पुन्य कमाउने । कमाउने कुरा पैसासंग मात्र जोडिएको हुँदैन । पुण्यभन्दा ठूलो कमाइ अरु केहि हुँदैन |
- बैंक, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, बिद्युत आदि जनसम्पर्कका कार्यालयले हरेक बैंकका हरेक शाखाबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउने । क्यासलेस लेनदेनलाई प्रेरित गर्ने | टाइम कार्ड लागु गरेर भीड नियन्त्रण गर्ने । फाइललाई डिजिटल बनाउने ।
- रुघाखोकी, ज्वरो वा अन्य स्वास्थ्य समस्या भए घरमै आराम गर्ने । बिरामी हुँदा आफुले अरुलाई सार्ने मात्र होइन अरुको संक्रमण आफुलाई छिटो सर्ने खतरा पनि हुन्छ ।
- सकभर पानी, खाजा घरबाट लिएर जाने वा सफा र झ्यालहरु धेरै भएको रेस्टुरेन्टमा सुरक्षित रुपमा खाने ।
- आफ्नो पसल जति धेरै सफा गरिन्छ, जति धेरै मापदण्ड पुर्याएर संचालन गरिन्छ तथा जति धेरै आफ्ना कामदारलाई सफा बनाइन्छ, त्यति धेरै चल्छ । यो सुत्र सबैले अपनाउने ।
- कामबाट घरमा आएपछि मास्क, चस्मा, झोला, बाहिरी कपडा आदिलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने, नुहाउने अनि मात्र परिवारसंग घुलमिल हुने ।
- ग्राहकलाई सुरक्षित बनाउनु हरेक व्यवसायीको दायित्व हो ।
- हामी सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्यौं भने संक्रमण घट्दै जान्छ । संक्रमण घटेपछि लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुँदैन । हामी पनि सुरक्षित हुन्छौं ।
भाद्र २४, २०७७ बुधवार १९:३८:१२ बजे : प्रकाशित
# डा. रवीन्द्र पाण्डे
गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली बर्साउने हैन, जनतासँग संवाद गर्नुस्
गगन थापा । काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।
तर प्र.जि.अ.हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्र.जि.अ.हरु लाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होईन ।
अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । फेरी जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ.हरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होईन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ. लाई गुहार्नु पर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतृतव जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।
आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्र.जि.अ. को रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा । कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आईसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम-नागरिक र जन-प्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्र.जि.अ. को घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?
केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं "काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस् । संभाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर , २ हप्तापछि जनजिवन सहज वनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो 'घर वास- सुरक्षित वास' भनेर मात्र हुँदैन ।" तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।
अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोक बाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको , वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?
सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के-के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के-के गर्दै छौ, र कहिले सम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के-के छन् ? आथाह परिश्रमबाट अलि अलि गरेर तङ्ग्रिएका स-साना व्यपार र व्यवसाय थला परेर जिवन भरीको पूंजी एन निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यपार र व्यवसायलाई आड र भरोस दिने तिम्रा कार्यक्रम के-के हुन् ? रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ति किसानका लागि के के गर्‍यो, के गर्दैछ?
स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन? यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ? दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, वालवालिकाहरूका बारेमा के सोँच छ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अबस्था कसरी संवोधन गर्छौ?
यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना-अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्छ । कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् ।
यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तीबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र ईमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।
भाद्र २४, २०७७ बुधवार ११:५८:२१ बजे : प्रकाशित